တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးသည် ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်ဖို့ မဟုတ်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ - Yangon Media Group
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးသည် ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသည်။ ဧပြီ ၅ ရက် သထုံမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ၎င်းက အထက်ပါအတိုင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတာ အင်မတန်မှ အရေး ကြီးပါတယ်။ တချို့က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတာ ပြည်သူတွေကို အ နိုင်ကျင့်ဖို့လို့ထင်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါ ဘူး၊ ဥပဒေဆိုတာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုကို တည်ငြိမ်အောင်လို့ လုပ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေပါ”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
တရားမျှတသောဥပဒေများ မဟုတ်ပါက လွှတ်တော်မှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ၍ရကြောင်း၊ ဥပဒေများသည် ထာဝရမူလအတိုင်း တည်ရှိ နေမည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ”ဒါပေမဲ့ အများအတွက် တရားမျှတဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ’်’ ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုသည်။ ယင်းအပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံခွဲတစ်ခုတည်ဆောက် မည့်စီမံကိန်းအတွက် သုသာန်မြေကို ရွာသားအားလုံးနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိ ဘဲ ဆောင်ရွက်သည်ဟုဆိုကာ ပြည်သူတစ်ဦးက တင်ပြခဲ့ရာ နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ရွာသူရွာသားများနှင့် သေချာစွာညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ခဲ့သည်။
”တချို့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာတွေက ဘာလဲဆိုတော့ အုပ်ချုပ် ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ထိတွေ့မှုနည်းတဲ့ပြဿနာ ပါပဲ။ ကျွန်မတို့ အမြဲပဲပြောပါတယ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်။ ပွင့် လင်းမြင်သာမှုဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိတယ်။ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်။ အစိုးရအတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရသည်ကို ပြည်သူသိရှိပါက နားလည်မှုပေးနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင် ခံကပြောသည်။ သထုံမြို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ထံတင်ပြခွင့်တောင်းခံထားသူ ၅ဝ ရှိပြီး ယင်း ၅ဝ အနက်မှ ငါးဦးအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ကာ တင် ပြခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းငါးဦး၏တင်ပြချက်များမှာ သောက်သုံးရေ၊ ကျူးကျော်အဆောက်အအုံ၊ သိမ်းဆည်းခံမြေယာ၊ ဘုရားပြုပြင်ခြင်း၊ သုသာန်မြေနှင့် လျှပ်စစ်မီးတို့ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်တင်ပြထားသော မေးခွန်းများကို မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်များတွင် တူညီဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပထမနှစ်ဝက် အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်မ
နိုင်ငံသားများ မုဒိတာပွားနိုင်ပါက တိုင်းပြည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရန် ပူစရာမလိုတော့ဟု နိုင်ငံတေ?
လာမည့်နှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှု၊ ခရီးသွား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေ?
ဒဏ်ရာကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနှင့် ကော့စီရယ်နီ လွဲချော်ဖွယ် ရှိ၊ အာဆင်နယ်ဂျာစီနှင့် အို
အာဏာရလျှင် အဆင်သင့် တာဝန်ယူနိုင်ရန် အရိပ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းထားဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆို